Alternating Ugbu a System na Direct Ugbu Sistemu (AC&DC Sistemụ), China Alternating Ugbu Sistemu na Direct Ugbu Sistemu (AC&DC Sistemụ) Nsuputa, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwa igwe na igwe eletrik zuru oke>Sistemụ AC&DC
1.The DC ngwaọrụ ngwaọrụ nwere ọrụ nke ime nha, remote signaling, remote control, etc., nke nwere ike na-aghọta na-adịghị ele anya ọrụ na ike izute nkịtị ọrụ na-ekwe nkwa na oghere na mmechi nke ọsọ agba anọ nchebe, akpaka ngwaọrụ, elu voltaji circuit. ndị na-agbaji, ọkụ ihe mberede na kọmputa anaghị akwụsị n'okpuru ọnọdụ mberede. Ọkụ ọkụ na-enye ike DC ma ọ bụ mgbe ike AC efunahụ, a na-enye ike AC site na ngwaọrụ inverter.
Ọ dị mma maka ebe ndị chọrọ ọkụ ọkụ DC dị ka ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ụgbọ okporo ígwè eletrik, petrochemicals, metallurgy, ebe ndị na-agbanwe agbanwe na nnukwu ụlọ, iji hụ na arụ ọrụ dị mma na ntụkwasị obi nke akụrụngwa.
2.The AC ike nkesa ngwaọrụ nke ike nke abụọ akụrụngwa dabeere na mkpa ndokwa nke "Power Plant, Substation Engineering na Relay Protection Test Instrument Configuration Quota" na Ministry of Electric Power Industry "Power System Relay Protection and Safety Automatic Equipment. Usoro mgbochi ihe mberede". Nhọrọ nke ndị na-agbaji sekit nke dị elu na-echebe obere sekit na ibu ibu nke sekit, na-enye ọkụ eletrik dị mma na nke a pụrụ ịdabere na ya maka ọrụ ụlọ ọrụ nke abụọ na saịtị, ma na-enye nkwa a pụrụ ịdabere na ya maka imeziwanye àgwà nke ọrụ dị iche iche ma hụ na ọ dị mma. nchekwa nke ndị ọrụ na akụrụngwa.
1.The Features nke DC usoro ngwaọrụ:
Microcomputer na-achịkwa elu ugboro mgba ọkụ DC ngwaọrụ ngwaọrụ nwere nnukwu voltaji na kwụ ọtọ ugbu a ziri ezi, obere size, ìhè arọ, elu arụmọrụ, mmepụta ripple, ala harmonic distortion, elu ogo nke automation na elu pụrụ ịdabere na, na ike kwadebere na cadmium nickel batrị, acid acid. Batrị ndị na-egosi na valvụ na-achịkwa batrị lead-acid nwere ike ghara ịnọ na nche.
2. Oke ngwa nke ngwaọrụ sistemụ AC:
(1) Mgbe ike nrụpụta nke ngwaọrụ ahụ zuru oke, ọ ga-amachi ugbu a na-akpaghị aka na-enweghị oke ibu;
(2) Ngwa ahụ nwere ọrụ nke nyocha onwe onye, ​​​​nchọpụta onwe onye kpatara, mgbake onwe na njikwa ọgụgụ isi.
(3) A na-achịkwa ngwaọrụ ahụ dị ka isi iyi dị ugbu a n'oge arụ ọrụ, ọ nweghịkwa ohere nke resonance na impedance usoro.
Horizontal Francis Turbine maka ọdụ ike mmiri dị obere na ọkara